IP vs Ifconfig: Miiska isu dhigma | Laga soo bilaabo Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Shabakado / Adeeg
Waad ku mahadsan tahay qodobbada ay MSX igu dhaafisay shalay faallooyin, wax yar ayaan ka bartay amarka IP iyo kala duwanaanshaha ay la leedahay ifconfig.
Taasi waa sababta aan u qoro maqaalkan, marka hore inaan helo tarjumaad Isbaanish ah maqaalka asalka ah Ingiriisiga, iyo tan labaad, inaan u noqdo xusuus qor haddii aan u baahdo.
Baaxadda maqaalka awgood, qiimayaasha qaarkood ee jadwalka waa "laga jarayaa", laakiin waxay ku jiraan hal xariiq
Aan aragno isbarbardhiga markaa:
Tus qalabka shabakada iyo dejintooda #ifconfig $ ip show show
$ ip xiriiriye show
Ka hawlgal interface network # ifconfig eth0 kor # ip link deji eth0 up
Jooji xiriirinta shabakadda # ifconfig eth0 hoos # ip link dhigay eth0 hoos
Deji cinwaanka IP-ga # ifconfig eth0 192.168.1.1 # ip address ku dar 192.168.1.1 dev eth0
Tirtir cinwaanka IP cinwaanka # ip ee 192.168.1.1 dev eth0
Kudar "interface" dal-ku-gal ah # ifconfig eth0: 1 10.0.0.1/8 # ip addr ku dar 10.0.0.1/8 dev eth0 label eth0: 1
Kudar gelitaanka miiska ARP # arp -i eth0 -s 192.168.0.1 00: 11: 22: 33: 44: 55 # ip der dar 192.168.0.1 lladdr 00: 11: 22: 33: 44: 55 nud joogto ah dev
U beddel aaladda ARP si aad u demiso # ifconfig -arp eth0 # ip link dhigay dev eth0 arp off
Tanina waa tan, ama ugu yaraan waxa ugu muhiimsan ee maskaxdayda ku jira.
Waxay ii sheegi karaan waxay rabaan, taas IP waa ka awood badan yahay taasna ifconfig Waa duugoobay, laakiin ma diidi karo in hadda IP-gaaga ay tahay inaad ku qorto cabbirro badan oo dheeri ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Shabakado / Adeeg » IP vs Ifconfig: miiska isu dhigma
Xaashida khiyaamada aad u anfacaya! Mahadsanid.
Waan ilaaway, iproute2 amarradu waxay u dhowdahay dhammaantood waxay leeyihiin xiriir gaaban, tusaale ahaan 'ip addr show' waxaa lagu soo koobi karaa 'ip a', iwm.
Way mudan tahay in la baaro maxaa yeelay markaad xirto iyaga maalinta oo dhan waxa ugu yar ee aad dooneysid inaad sameyso waa qor, qor, qor, qor, qor, qor, qor!
Kaliya waxaan u baahanahay 3-da amar ee hore [/ yaoming]
Jajaja run !!! sidoo kale "ip route show" ma muujinayo wax soo saar leh tabs sida "route -n" waxayna ka dhigeysaa mid dhib badan in la aqriyo
Ku jawaab DACCorp
Wax ku biirinta wanaagsan, amarrada kale ee liiska
Ku jawaab kristianjgs
Maxay tahay faa'iidooyinka ay ku leedahay ifconfig? marka laga reebo inaad waxbadan qorto, dabcan xD
Su'aal wanaagsan…. hadda jimicsiga xusuusta waxbadan baro! 😛
Hagaag, hada hadaad eegto miiska aan kor dhigay, waxaad arki kartaa wax leh IP aan lahayn IFCONFIG. 😉
Waad ku mahadsantahay tabaruca 🙂 oo waxaan ku weydiinayaa, muxuu qofku u doonayaa inuu tirtiro IP? Waxaan leeyahay maxaa fiicnaan lahaa in la dhaho sidey ahaan laheyd
Way fududahay. Aynu nidhaahno waxaan isticmaalaa hal IP-ga hal darajo iyo IP kale kan kale. Hadda korontada ayaa ii adeegi doonta haddii aan doonayo inaan baabi'iyo mid ka mid ah IP-yada, si PC-yada ku jira qaybahaas aysan i arki doonin. Laakiin adiga oo mid kale kaaga jawaabaya su'aashaada, waayo? 😉
Miyaan IP-ga laga saari karin ifconfig adoo hoos u dhigaya interface-ka oo dib u dhigaya?
Tusaale ahaan: waxaan haynaa IP xxx.xxx.xxx.xxx oo ah interface-ka wlan1 waxaanan dooneynaa inaan ka saarno.
ifconfig wlan1 hoos && ifconfig wlan1 kor
Taasi waa waxa aan u maleynayay, waxaad ka saareysaa isdhexgalka iyo muddada, ma jiro IP dambe.
Isku mid ayaa ah is-dhexgal aan lahayn IP, kaas oo ah inuu xirmo isku xirmay.
Sure, waxaad sidoo kale ku dili kartaa duqsiga qori caaradiis.
Weligaa kama aadan shaqeyn shabakadaha waxaadna u isticmaashay mashiinka GNU + Linux sida router leh Quagga sax?
Waxaa jira xaalado badan oo ka baxsan qolkaaga jiifka halkaasoo ay lagama maarmaan tahay in si joogto ah loo soo dejiyo oo loo soo dejiyo IP-yada iyada oo aan la rogin xiriirka shabakadda isla markaana looga tago isticmaaleyaasha kale khadka.
Aad u fiican miiskaas in loo haysto tixraac ahaan.
IP waxay umuuqataa inay kasii dhib badan tahay Ifconfig, laakiin waxaan qabaa su'aal. Maxaa IP ka fiicnaanaya Ifconfig ka sokow inuu yahay mid casri ah oo leh laba ikhtiyaarro badan?
Hawlaha cusub ee iproute2 keenayaa waa kuwo aan qiimo lahayn (dhammaantood, maahan oo keliya kuwa halkan lagu muujiyey), illaa heer ay si fiican u badbaadin karaan rehash oo ay ku dari karaan aaladda net-ka iyagoo ku daraya a .0001
Jidka leh "ifconfig eth0 0.0.0.0" cinwaanka IP-ga waa laga saaray
Iproute2 waa ururinta yutiilitiyada xakamaynta isku xidhka TCP / IP iyo xakamaynta taraafikada Linux. Waxaa hadda gacanta ku haya Stephen Hemminger. Qoraaga asalka ah, Alexey Kuznetsov, wuxuu caan ku yahay hirgelinta QoS ee kernel Linux.
Inta badan buugaagta qaabeynta shabakadu wali waxay tixraacaan ifconfig iyo marinka sida aaladaha aasaasiga u ah qaabeynta shabakada, laakiin ifconfig waxaa lagu yaqaan inay ku dhaqmaan si aan ku filnayn jawiga shabakada casriga ah. Waa inay hoos u dhacaan, laakiin inta badan hargabyada wali way ku jiraan iyaga. Inta badan nidaamyada isku xidhka shabakadu waxay adeegsadaan ifconfig oo markaa waxay bixiyaan qaab muuqaal kooban. Mashruuca / iwm / shabakadu wuxuu ujeedkiisu yahay inuu taageero inta badan teknoolojiyada shabakadaha casriga ah, maadaama uusan isticmaalin ifconfig oo u ogolaanaya maamule nidaam inuu adeegsado dhammaan astaamaha iproute2, oo ay ku jiraan xakamaynta taraafikada »
+1 Xog wanaagsan, hada waa ii cadahay.
Xog wanaagsan, in kasta oo Arch aan la isticmaalin eth0, laakiin qiyamka sida enp0s3.
Waa sax, in kastoo loo qaabeyn karo inay tahay eth0 ama wlan0. Waxaan la yaabanahay waxa caqligu u yahay ka tagida qaabka enp #s # (ama wlp # s #) qaabka? Sidoo kale xulashadaada ip marka aan wada ognahay ifconfig, waayo?
Ugudambeyn waad la qabsaneysaa, Archlinux maadaama uusan laheyn ifconfig waxaan go aansaday inaan barto tan maxaa yeelay mar uun qaar ka mid ah distros badan ayaa u calaamadeyn doona inay yihiin kuwo duugoobay. Qoraal aad u wanaagsan.
Waxaan rabaa in aan u iibsado Linux kombuyutarkayga
Ku jawaab suugada
Saulo, haddii aad rabto inaad tijaabiso Linux uma baahnid inaad iibsato (in kastoo aad awooddo). Haddii dulqaadkaagu uusan sugi karin isticmaalkiisa, waxaan kuu sheegayaa inta badan noocyada (qeybinta) Linux inay leeyihiin xiriir deg deg oo bilaash ah (bilaash ah), oo aad ku gubi karto disk ama aad ku dhejin karto xusuusta USB si aad hadhow ugu rakibto kombiyuutarkaaga. Waxaan kugula talinayaa inaad ku aragto hagayaal youtube ama baloogyada qaarkood oo ku saabsan rakibidda, ma ahan wax adag.
Xiiso leh, ifconfig wali way fududahay in la barto.
Xubuntu Saucy Salamander Beta 2 ayaa lagu heli karaa xoogaa horumar ah